Ọrụ na -akwado China maka ụdị ihe nrụpụta na nrụpụta na ụlọ nrụpụta | ỊZỤLI-Elec
Kedu ihe bụ Fasteners?
Fastener bụ aha izugbe nke ụdị akụkụ igwe eji arụ ọrụ na ijikọ ma jikọọ akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa (ma ọ bụ ngwa) n'ozuzu ya. A makwaara ya dị ka akụkụ ọkọlọtọ n'ahịa.
Ọ na -agụnyekarị ụdị akụkụ 12 ndị a:
Mgbachi, studs, kposara, mkpụrụ, kposara onwe onye, ​​kposara osisi, asher, mgbanaka njigide, atụdo, rivets, mgbakọ na njikọ abụọ, mbọ ịgbado ọkụ.
(1) Kpọchie: ụdị ihe nkedo nke nwere isi na kposara (cylinder nwere eriri mpụga), nke kwesịrị ka ejikọ ya na mkpụrụ iji wee jikọta ya na oghere ya abụọ. A na -akpọ ụdị njikọ a njikọ njikọ. Ọ bụrụ na a tọpụghị mkpụrụ ahụ site na mkpọchi, enwere ike ikewa akụkụ abụọ ahụ, yabụ njikọ njikọ ahụ bụ nke njikọ mbughari.
(2) Stud: ụdị ihe nkwụnye na -enweghị isi na naanị eriri mpụga na nsọtụ abụọ ahụ. Mgbe ị na -ejikọ, a ga -eji oghere eriri dị n'ime wee mechie otu akụkụ ahụ, akụkụ nke ọzọ ga -esite na oghere gafee akụkụ ahụ, wee tụgharịa na nut, ọbụlagodi na akụkụ abụọ ahụ jikọtara nke ọma. A na -akpọ ụdị njikọ a njikọ njikọ, nke bụkwa njikọ mbughari. A na -ejikarị ya eme ihe mgbe otu akụkụ jikọtara ya nwere nnukwu ọkpụrụkpụ, chọrọ nhazi kọmpat, ma ọ bụ na ọ baghị uru maka njikọta bolt n'ihi ntisa ugboro ugboro.
(3) ịghasa: ọ bụkwa ụdị ihe nkedo nke nwere isi na ịghasa. Enwere ike ikewa ya ụzọ atọ dabere na ebumnuche: ịghasa ihe nchara, ịghasa setịpụrụ na ịghasa ebumnuche pụrụ iche. A na -ejikarị kposara igwe maka njikọ njikọ n'etiti akụkụ nwere oghere nwere oghere na akụkụ nwere oghere, na -enweghị nha dabara (ụdị njikọ a ka a na -akpọ njikọ njikọ, nke bụkwa nke njikọ mbughari; enwere ike ijikọ ya na mkpụrụ maka njikọ njikọta n'etiti akụkụ abụọ nwere oghere.) A na -ejikarị ihe nkedo edozi ka ọ dozie ọnọdụ dị n'etiti akụkụ abụọ. A na -eji kposara ebumnuche pụrụ iche, dị ka nku anya, maka ịwụnye akụkụ.
(4) Nut: ya na oghere eri dị n'ime ya, udi ya bụ kọlụm hexagonal dị larịị, ma ọ bụ kọlụm square dị larịị ma ọ bụ cylindrical dị larịị. A na -eji ya ijikọ ma jikọọ akụkụ abụọ n'ozuzu ya na ihe mkpọchi, studs ma ọ bụ kposara nhazi ígwè.
(5) kposara nke onwe: yiri ịghasa, mana eri dị na ịghasa bụ eri pụrụ iche maka ịpị onwe ya. A na -eji ya ijikọ ma jikọta ihe abụọ dị mkpa dị na ọla n'otu. Ekwesịrị ịme obere oghere na akụrụngwa tupu oge eruo. Maka ịghasa nwere ike siri ike, ọ nwere ike tinye ya ozugbo n'ime oghere nke akụrụngwa iji mepụta eriri dị n'ime ya. Ụdị njikọ a bụkwa nke njikọ mbughari.
(6) Nkedo osisi: ọ dị ka ịghasa, mana eriri dị na ịghasa bụ eri pụrụ iche maka ịgha osisi, nke nwere ike tinye ya ozugbo n'ime akụkụ osisi (ma ọ bụ akụkụ) iji jikọta igwe (ma ọ bụ na-abụghị nke igwe). ) akụkụ nwere oghere site na ngwa osisi. Njikọ a bụkwa njikọ enwere ike ịwepụ.
(7) Onye na -asacha efere: ụdị ihe nkedo nwere okirikiri okirikiri. A na -etinye ya n'agbata nkwado nke bolts, kposara ma ọ bụ mkpụrụ na elu nke akụkụ njikọ, nke na -arụ ọrụ ịbawanye mpaghara kọntaktị nke akụkụ ejikọtara, na -ebelata nrụgide n'otu mpaghara yana ichebe elu nke akụkụ ejikọtara na mmebi; Ụdị ihe ọzọ na -ehicha ihe pụkwara igbochi ude ahụ ịtọpụ.
(8) Mgbaaka na -ejigide: etinyere ya na oghere ma ọ bụ oghere oghere nke nhazi ígwè na akụrụngwa iji gbochie akụkụ dị na ogwe ma ọ bụ oghere ịkwaga n'aka ekpe na aka nri.
(9) Ntụtụ: a na -ejikarị ya maka idobe akụkụ, yana ụfọdụ nwekwara ike iji maka njikọta akụkụ, idozi akụkụ, ike mbufe ma ọ bụ mkpọchi ndị ọzọ.
(10) Rivet: ụdị ihe nkedo nwere mkpisi isi na ntu, nke a na -ejikọ ma jikọọ akụkụ abụọ (ma ọ bụ ihe mejupụtara) ya na oghere iji mee ka ha bụrụ nke zuru oke. A na -akpọ ụdị njikọ a njikọ rivet, ma ọ bụ riveting maka mkpụmkpụ. Ọ bụ njikọ na -enweghị ike wepu ya. N'ihi na ikewapụ akụkụ abụọ ejikọtara ọnụ, a ga -ebibi rivets n'akụkụ ahụ.
(11) Mgbakọ na otu njikọ: ọgbakọ na -ezo aka n'ụdị ihe nkedo nke ejikọtara ọnụ, dị ka nkedo igwe (ma ọ bụ bolt, nke a na -enye onwe ya) na igwe na -asachapụ (ma ọ bụ asher spring, mkpọchi mkpọchi); Otu ụzọ njikọ na-ezo aka n'ụdị ihe nkedo nke na-ejikọta bolt pụrụ iche, nut na washer, dị ka nnukwu njikọ njikọ hetagon isi isi hexagon maka nhazi nchara.
(12) Nkwa ịgbado ọkụ: n'ihi ngwa mgbakwunye dị iche nke nwere mkpanaka mkpisi na isi ntu (ma ọ bụ enweghị ntu), a na -ejikọ ya n'otu akụkụ (ma ọ bụ akụrụngwa) site na ịgbado ọkụ, ka ọ wee jikọọ n'akụkụ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Ọrụ akụkụ akụkụ OEM ODM
Osote: Ọrụ nhazi ngwa ngwa OEM ODM
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Mmiri Efere, Ihe nkedo, Ngwaahịa niile